I-India iimfuno zeVisa yoNyango | e-Medical Visa India
I-Visa yeNdiya yoNyango yeIndiya (i-India e-Medical Visa) yabo bonke abatyeleli kwezonyango eIndiya-Isikhokelo esipheleleyo
I-Indiya inomzi-mveliso okhula ngokukhawuleza kwezokhenketho ngenxa yezakhono zabasebenzi kunye neendleko eziphantsi kakhulu zonyango lwempilo yezempilo. Uhlobo olukhethekileyo lweVisa luphehlelelwa nguRhulumente wase India ukuncedisa ukhenketho lwezonyango, iIndiya ye-e-Medical Visa. Iindwendwe ezivela eUnited States, eYurophu, e-Australia ziye zanda ngokukhawuleza kweli candelo.
Zithini iimfuno ze-Indian Visa (India e-Medical Visa)?
The Urhulumente waseIndiya inomgaqo-nkqubo oguqukayo kubakhenkethi kwaye ikhuthaza uKhenketho lwezoNyango ukuba Indiya . Iindwendwe ezinomdla wokuza eIndiya ngenjongo yokuqala yonyango zinokufaka isicelo se- Visa yezoNyango bona, okanye ukuba baceba ukunceda okanye ukuncedisa umntu emva koko a I-Visa yeAllali yoNyango kufuneka ifakwe.
Lithini ixesha leVisa yaseIndiya yoNyango (i-India e-Medical Visa)?
URhulumente waseIndiya uyayivumela le visa Iintsuku ezingama-60 zokusebenza ngokuzenzekela. Nangona kunjalo, umgaqo-nkqubo omtsha we-visa wase-India uvumela iphepha elisekwe kwi-visa ukuba libe njalo yandiswa ukuya kufikelela kwiintsuku ezili-180. Qaphela ukuba ungenile e-India kwi I-Visa yabakhenkethi yaseIndiya or Iibhasi zaseIndiya iVisa kwaye ufuna uncedo lwezonyango ngexesha lokuhlala kwakho eIndiya ebingalindelwanga kwangaphambili, emva koko awudingi Visa yezoNyango. Kwakhona, awudingi visa yonyango ngokubonisana nogqirha ngemeko yakho. Nangona kunjalo, kunyango, iVisa yoNyango iyimfuneko.
Loluphi unyango oluvunyelweyo kwi-Visa yeNdiya yaseIndiya (eIndiya e-Medical Visa)
Akukho sithintelo kwiinkqubo zonyango okanye unyango olunokwenziwa kwi-Visa yeNdiya yaseMelika.
Uluhlu lonyango oluyinxalenye lubandakanyiwe ukulungiselela ireferensi:
Iinwele, Unyango loLusu
Unyango lwesifo sikashukela
Imeko yempilo yengqondo
Unyango lwamalungu omnwe
Yintoni inkqubo yokufumana i-Visa ye-Indian Medical (India e-Medical Visa)?
Inkqubo yokufumana i-Visa yeNdiya yoNyango kukufaka isicelo Ifomu yesicelo seVisa yaseIndiya kwi-Intanethi, yenza intlawulo, unike ubungqina obuyimfuneko njengoko uceliwe kunyango kubandakanya ileta evela esibhedlele okanye ekliniki. Le nkqubo igqiba kwiiyure ezingama-72 kwaye iVisa evunyiweyo yathunyelwa nge-imeyile.
Ndingakwazi ukudibanisa imisebenzi yabakhenkethi kutyelelo lwam lwezonyango?
Hayi, kufuneka ufumane i-Visa eyahlukileyo ye-India ukulungiselela injongo nganye. Ayivumelekanga ukuba iye kunyango lwangaphandle ngelixa ukwiVisa yabakhenkethi.
Ndingahlala ixesha elingakanani kwiVisa yeIndiya yoNyango (i-India e-Medical Visa)?
Ngokuzenzekelayo, ixesha elivunyelweyo kwi-Visa ye-Indian Medical Visa ziintsuku ezingama-60.
Zithini iimfuno zokufumana iVisa yoNyango yeNdiya?
Izizwe ze-eVisa India mazibe ngamazwe afanelekileyo abadinga iVisa yoNyango yaseIndiya bavumelekile ukuba bafake izicelo kwi-Intanethi kule webhusayithi https://www.www.india-visa-online.com nefom yesicelo esimahla ye-eVisa India. Ufuna incwadi evela kwisibhedlele e-India apho uceba ukwenza unyango.
Unokucelwa ukuba unikeze a ubungqina beemali ezaneleyo ngokuhlala kwakho e-India. Unokucelwa ukuba ubonelele itikiti lokuhamba ngenqwelomoya ukubuyela kwilizwe lakho emva kokuba unyango sele luphelile. La maxwebhu axhasayo anokunikezelwa kuthi Desk Uncedo okanye ulayishwe kamva kule webhusayithi.
Enye yezinto eziluncedo kwi-Indian Visa yoNyango kukuba ngokungafani neVisa yabaKhenkethi kwiintsuku ezingama-30, esebenzayo kuphela kumangenelo amabini, le Visa ivumela amangenelo amathathu ukuya eIndiya ngeentsuku ezingama-60 zokusebenza kwayo. Kananjalo abalindi babini bavumelekile ukuba bahambe nawe kule Visa ekufuneka ifayile eya kuyo kunye neya Visa ye-Attendant Visa eyayo.
Zeziphi ezinye iimeko kunye neemfuno zokufumana i-Visa ye-Indian Medical?
Kuya kufuneka ukuba uqaphele ezi meko zilandelayo kunye neemfuno ze I-eVisa kunyango:
Ukususela kumhla wokufika eIndiya, ukuqinisekiswa kwe-Indian e-Medical Visa iya kuba ziintsuku ezingama-60.
Amangenelo amathathu eIndiya avumelekile kule Visa yase-Indedical India.
Ungayifumana i-Visa yoNyango ukuya kathathu ngonyaka.
I-Visa yoNyanga ye-elektroniki ayinokwandiswa.
Le Visa ayinakho ukuguqulelwa kubakhenkethi okanye iVisa yokushishina kwaye ayinakutshintsha.
Ayivumelekanga ukungena kwiindawo ezikhuselweyo nezithintelweyo.
Uyacelwa ukuba ubonelele ubungqina benkxaso-mali yokuhlala eIndiya.
Kufuneka ube nePDF okanye ikopi yephepha kunye nawe xa usiya kwisikhululo seenqwelomoya.
Itikiti lokubuya lingacelwa kuwe kwi-eMedical India Visa.
Akukho Visa lonyango e-India elikhoyo, umenzi-sicelo ngamnye kufuneka afake isicelo ngokwahlukeneyo.
Ipaspoti yakho kufuneka ibe isemthethweni kangangeenyanga ezi-6 ngomhla wokungena eIndiya.
Kuya kufuneka unamaphepha amabini angenanto kwipaspoti yakho ukuze abasebenzi abafudukayo kunye nabasemdeni baxhome isitampu kwisikhululo seenqwelomoya ukuze bangene kwaye baphume kwisikhululo seenqwelomoya.
Udinga incwadi yokundwendwela yesiqhelo. Unzakuzaku, inkonzo, iimbaleki kunye neencwadana zokundwendwela ezisemthethweni azinakusetyenziswa ekufumaneni iVisa yoNyango yeNdiya
Qaphela ukuba unyango lwakho luza kuhlala ngaphezulu kweentsuku ezili-180 kuya kufuneka ke ufake isicelo sephepha okanye eIndiya iVisa yoNyanga kune-Visa ye-elektroniki kule webhusayithi.
Kuthatha ixesha elingakanani ukufumana i-visa yonyango e-India?
Unokufaka isicelo kwi-intanethi kule webhusayithi, kwaye kungathatha ukuya kwimizuzu emi-3 ukuya kweli-5 ukugcwalisa isicelo se-Intanethi. Kuya kufuneka ukuba ube nekhadi lokuthenga ngetyala / lebhanki okanye le-imeyile ye-Paypal. Vuma i-Visa ye-Indian Medical i-imeyile kwi-iiyure ezingama-72 kwiimeko ezininzi. Kuyacetyiswa ukuba ufake isicelo kwi-intanethi kunokundwendwela i-Indian Embassy okanye iKhomishini ePhezulu njengoko le yindlela ecetyiswayo yokufumana i-Visa ye-India e-India.
Siyaqonda ukuba i-Visa ye-India yoNyango (i-India e-Medical Visa) sisigqibo esinzulu sempilo yakho kwaye ufuna ukuqiniseka ukuba i-Visa yakho yaseIndiya iyavunywa, nceda ukhululeke ukucacisa amathandabuzo akho malunga IDesika yoNcedo lweVisa yaseIndiya.
Qinisekisa ukuba ujongile ukulungelwa kwe-eVisa yakho yaseIndiya.
Nceda ufake isicelo seVisa yaseIndiya kwiintsuku ezingama-4 ukuya kweli-7 ngaphambi kokuba ubhabhe.
Isicelo seNdiya eVisa